Kedu ihe bụ ụgbọ elu Benioff na otu ọ dịruru mkpa | Network Meteorology
Benioff ụgbọ elu
Portillo nke German | | Geology
Mgbe anyị na-amụ ihe akwa ụwa, anyị ruru a isi na anyị na-akpọ Benioff ụgbọ elu. Ọ bụ mpaghara ebe enwere nnukwu mmegharị ahụ na njedebe nke tectonic efere nke ahụ na-aga n'ihu n'otu akụkụ nke olulu mmiri nke oké osimiri. Planegbọ elu Benioff a dị ezigbo mkpa mgbe a bịara n'ịmara mmetụta nke ala ọma jijiji ụfọdụ n'elu.
Anyị ga-akọwa etu ụgbọ elu Benioff siri dị mkpa maka nghọta ike ụwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, nke a bụ post gị.
1 Kedu ihe bụ ụgbọ elu Benioff
2 Njirimara nke ụgbọ elu Benioff
3 Ebe lithosphere
4 Mkpa ụgbọ elu Benioff dị
Kedu ihe bụ ụgbọ elu Benioff
Ndị ọkà mmụta sayensị Hugo Benioff na Kiyoo Wadati ga-abụ naanị ndị na-ahụ maka ịdị adị nke mpaghara mpaghara a nke na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ya mere, na mpaghara a a makwaara ya site na aha Wadati-Benioff. Ọ bụ mpaghara ebe mmegharị ahụ na-arụ ọrụ na nsọtụ nke efere ahụ.
Mgbe etinyere lithosphere nke oke osimiri na mpaghara mmiri mmiri, ọ na-apụta site na ụgbọ elu nke na-egbutu elu ma mepụta ụdị arc nke na-ekpebi olulu mmiri. Na Okporo mmiri Ọ bụ mpaghara ebe efere oke osimiri dị n'okpuru ime ụwa ga-apụ n'anya ụwa. N'aka nke ọzọ, a ga-enwe ebe ọzọ ebe ọhụụ ọhụrụ nke osimiri na-apụta ma na-emepụta ala. Nke a bụ otú ụwa anyị si emepụta ma na-ebibi lithosphere na-aga n'ihu.
Na mgbe niile, mgbe efere dị n'etiti subduction na-efere ya na mpempe akwụkwọ ọzọ ahụ, ya mere, a na-emepụta ụfọdụ ala ọma jijiji. Ogologo na ike nke ala ọma jijiji ahụ na-adabere na njem na oge ọ ga-ewe iji mee. Ebumnuche nke ala ọma jijiji sitere na arca concave nke a na-akọwa site na olulu mmiri, nke bụ nke na-agwọ akara ahịrị dum. A maara mpaghara a ebe efere subduct na ala ọma jijiji dị ka ụgbọ elu Benioff.
N'aka nke ya, ebe a ma ọ bụ na-enyekwa izu oke ma ọ bụ ebe efere tectonic na-agbakọta. N’elu ụgbọ elu a, etinyere ala ọma jijiji ma ọ bụ ebumnuche nke ala ọma jijiji. Hypocenters bụ ebe ebe miri emi kachasị dị na anya site na ọdọ mmiri. Onyinye a bụ ọkà mmụta sayensị Hugo Benioff, ya mere aha ya.
Njirimara nke ụgbọ elu Benioff
Dịka usoro nke a siri dị, enwere ala ọma jijiji dị iche iche enwere ike ibute na mpaghara njikọta. Anyị ga-enyocha ụdị njirimara ọ bụla nke usoro ndị a kpatara:
Na mpaghara nke kacha nso n'oké osimiri bụ ebe mmegharị ala nke na-egosi ebe dị anya na-ewere ọnọdụ. Mmeghari ndị a bụ n'ihi mmetụta nke lithosphere nwere mgbe efere ahụ malitere ịmalite na nke ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị agaa mpaghara etiti, anyị ga-ahụ nke ahụ ọ bụ akụkụ nwere elu nke ụgbọ elu Benioff a dum. Na mpaghara ebe a bụ ebe ala ọma jijiji na-akpata esemokwu nke otu efere na ibe ya mgbe ọ nọ na usoro nke okpuru ala.
Ọ bụ nkukpọ a dị n'etiti efere n'oge usoro mbufe na-akpata ala ọma jijiji kacha njọ. Ha nwere ike ime na ogbu mmiri n’agbata kilomita 300 na 700. Ndị a bụ ndị dịkarịsịrị anya site n'olulu ahụ ma ọ bụ nsonaazụ nke mkpụmkpụ na mberede nke ihe niile na-edo onwe ha n'okpuru n'ihi mmegharị nke ihe ndị a na nrụgide. Anyị na-echeta na, Ka anyị na-abawanye omimi, otú ahụ ka nrụgide ahụ dị. Nrụgide a bụ nke na-egosipụta na ihe ndị a na-ewebata n'ime ụwa dị n'ime ga-adaba na gburugburu ọhụụ.
Ogo nke ụgbọ elu Benioff dị iche site na mpaghara ebe anyị nọ. Onu ogugu nke ugwu ndia nile kariri ogo iri anọ na ise. Ọ dị nso na ụgbọelu kwụ ọtọ.
Anyị na-echeta nke ahụ ebelata Ọ bụ elu ala nke ụwa siri ike. Ihe njiri mara ya bụ na o nwere nnukwu ike. Ọ bụ nke a na-ekpebi ihe nwere ike ime eriri ala na uwe elu. Uwe mkpuchi elu bụ akwa kachasị elu ma nwee ike ịsị na ọ na-ese n'elu mmiri. Mpaghara nke mmekorita nke di netiti ala na uwe elu bu ihe kachasi ike n'ihi tectonics efere.
La kọntinent jikọrọ ọnụ ọ bụ obere echiche karịa oke osimiri. Yabụ, mgbe enwere mmegharị efere enwere nsonaazụ dị iche. N'otu aka, ọ bụrụ na efere kọntinent abụọ na-asọrịta ibe ha, na-enwe otu njupụta, ma ọ bụghị na-edo onwe ha n'okpuru otu. Ihe na-eme n’okwu ndị a bụ na a orogenesis. Ọ bụrụ na efere dị n'oké osimiri emee ka efere kọntinent, ọ bụ ya na-etolite mpaghara mpaghara. Anyị na-ekwu maka oke osimiri ahụ na-agbadata na mpaghara ma na-eme ka akụkụ nke oke osimiri ahụ banye n'ime ime uwe elu ụwa.
Mgbe a na-ewebata ihe ọhụrụ n'ime akwa uwe ụwa, ọ bụ ebe convection ugbu a. Mmiri ndị a na-ebugharị ga-abụ n'ihi njupụta njupụta na ihe ndị ahụ. Cheta na mmeghari n’etiti otutu ihe na - aputa site na ebe e nwekarịrị njuputa rue ebe enwere obere njuputa.
Ebe lithosphere bu ihe eji efere tectonic di n’onu ya bu ebe ihe omuma ihe omuma nile a ga - abu. N'ihi esemokwu dị n'etiti efere na-achịkwa na kọntinent enwere magmatism na obuna mgbawa ugwu. Seismicity na orogenesis na-emekwa na ọnọdụ dị iche iche.
Mkpa ụgbọ elu Benioff dị
Planegbọ elu Benioff a dị ezigbo mkpa mgbe ọ na-amụ maapụ seismic nke ebe dị iche iche gburugburu ụwa. Ọ bụ mpaghara ebe ọ na-eme ka anyị hụ mmegharị dị iche iche nke teknụzụ tectonic. Ọ bara ezigbo uru na ịkọ ebe ala ọma jijiji ụfọdụ ga-eme.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mpaghara Benioff bụ ihe na-atọ ụtọ ịmara ịma mmegharị nke efere ndị dị ugbu a. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Benioff ụgbọ elu
eme 2 afọ
Eziokwu bu na syntax nke edemede putara otutu ihe ichoro, ya na otutu ahịrịokwu na enweghi isi.
N'aka nke ozo na ihe sayensi otu.
Nke a ọ na-ekpebi ihe nwere ike ime eriri ala?
Ihe jikọrọ kọntinent ahụ dịkarịkarịrị echiche karịa oke osimiri?
Ọ bụ nkukpọ a dị n'etiti efere n'oge usoro mbufe na-akpata ala ọma jijiji kacha njọ. Nke a ka mma otu a: Nkukota a n'etiti mbadamba n'oge usoro subduction bụ ihe kpatara ala ọma jijiji kacha njọ.
Orogenesis adịghị emepụta, a na-emepụta orogen ma ọ bụ ugwu. Orogenesis bu nnochi uzo nke orogen ma obu ugwu.
Ọ nwere ike igosi ọtụtụ nkebi ahịrịokwu dị ka nke ahụ